Iinkwenkwezi zaseHollywood kunye nemizobo yeklasikhi edityaniswe kolu ngcelele | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iinkwenkwezi zakudala zaseHollywood kunye nemizobo edumileyo exutywe kolu ngcelele lweMashups
Las Ukubengezela kwamanani bhanyabhanya eHollwood loo nto isenze ukuba sonwabe kwaye sithandane njengoMarilyn Monroe kwi Iziketi ezimhlophe nokuba uphambene, okanye uClint Eastwood ngokwakhe kwi Ngeqela leedola nguSergio Leone. Amaxesha e-cinema yaseHollywood ahlala egxunyekwe kwimemori yethu kwaye kukho amagcisa adlala ngokuwaxuba kunye nezinye ezakudala.
Ezi zakudala yimisebenzi yokupenda esinokuyikhumbula ngalo mzuzu xa sidlula phambi kukaMona Lisa, uFrida okanye kwa-Van Gogh ozimeleyo. U-Luigi Tarini ligcisa lase-Italiya elihlala eKrakow. Emva kokuhamba kwintsholongwane kuthotho lwayo "u-Obama noMerkel njengabalinganiswa abaphambili beemovie" kunye "neempawu ezothusayo kwiiMovie eziKhanyayo", ngeli xesha uLuigi usothusa kwakhona kwingcinga inkwenkwezi ephefumlelweyo ye-mashup series Imizobo yaseHollywood yakudala kunye nodumo.
Le ngcamango ilula kakhulu, kuba ithi ngaxeshanye ubuso babini buhlangene kwaye uzidibanisa zibe nye. Olu luhlu lwaqala, njengoko umlingisi ebeka, xa wabeka ubuso bukaClint Eastwood kunye kwiVan Gogh's-portrait. Kuba wayengonwabanga ngokwaneleyo ngesiphumo, wenza i-mashup enamacala amabini.
Ugcine amehlo kaClint Eastwood ngokungathandabuzekiyo impumlo kaVan Gogh kunye nesimbo sakhe sobugcisa esaziwayo. Isiphumo sifanelwe kukunconywa njengoko ubona kumfanekiso wentloko apho sifumanisa ukuba ukudibanisa kunomdla kwaye kuyamangalisa ngaxeshanye. Kubonakala ngathi ezi zimbini zidityaniswe ngokugqibeleleyo kwisiqwenga esimangalisayo.
Ingqokelela ibandakanya iikholaji ze Mona Mona kunye noMarylin Monroe kunye nesiphumo esimangalisayo sikaClark Gable kunye noVivien Leigh kwezidumileyo umke nogquthe. Imisebenzi yakhe iyafumaneka ukuze ithengwe ukusuka apha.
Okungakumbi malunga neHollywood kunye nobugcisa bakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Iinkwenkwezi zakudala zaseHollywood kunye nemizobo edumileyo exutywe kolu ngcelele lweMashups
Ukuphefumlelwa kwimixholo ye-90s yoyilo loyilo
Iilwandle ezinqabileyo zeLia Melia